I-Taliban imisa zonke iinqwelomoya ezisuka kwisikhululo senqwelomoya saseKabul
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan » I-Taliban imisa zonke iinqwelomoya ezisuka kwisikhululo senqwelomoya saseKabul
Abalwi beTaliban bajonge phambi kweHamid Karzai International Airport, eKabul, eAfghanistan,
Iiyunithi zeTaliban zize kufutshane ngqo nesikhululo seenqwelomoya zaza zadubula zaninzi ukuba zisasaze abantu ababethontelene apho.
I-Taliban irhoxisa konke ukuhamba kwisikhululo senqwelomoya saseKabul.
Ukuhamba kwesikhululo senqwelomoya i-Kabul International Airport "kumisiwe okwexeshana".
Zonke iinqwelomoya zacetyiswa ukuba zingabhabheli ngaphezulu kweAfghanistan.
Abameli beTaliban babhengeze namhlanje ukuba ukuhamba kwazo zonke iinqwelomoya ezisuka kwisikhululo seenqwelomoya iKabul International "kunqunyanyisiwe okwethutyana" de kwaphinda kwaziswa.
Ngokweengxelo zalapha, iiyunithi zeTaliban zize kufutshane ngqo nesikhululo seenqwelomoya zaza zadubula zalumkisa abantu ukuba basasaze apho.
Kwangoko, zonke iinqwelomoya ezisuka kwisikhululo seenqwelomoya iKabul zaye zarhoxiswa, ngelixa zonke iinqwelomoya ezihambahambayo zacetyiswa ukuba ziphinde zihambe kwaye zingabhabheli e-Afghanistan. NgoLwesibini, uNobhala Wezangaphandle wase-Bhritane u-Dominic Raab uthe imeko kwisikhululo seenqwelomoya iyazola.
Nge-15 ka-Agasti, Taliban wafudukela eKabul kwaye wanyanzelisa ulawulo olupheleleyo kwisixeko kwisithuba seeyure. Umongameli wase-Afghanistan u-Ashraf Ghani wehlile esikhundleni, njengoko watshoyo, ukunqanda ukuphalazwa kwegazi kwaye wabaleka kweli lizwe. Amazwe aseNtshona asusa abantu bawo kunye nabasebenzi bozakuzo.
Tourism Seychelles in Spain’s New Edition of the Dive Travel Show Novemba 30, 2021